दलाल पुँजीवादी सत्ता असफल भइसकेको छ – विप्लव, महासचिव, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी – eratokhabar
ई-रातो खबर २०७५, ४ माघ शुक्रबार १०:४१ January 18, 2019 922 Views
१) रातो खबरमा महासचिव कमरेडलाई स्वागत छ ।
रातो खबरलाई धेरैधेरै धन्यवाद !
२) गत मङ्सिर ८ गते पार्टीको आयोजनामा भव्य एवम् सानदार जनप्रदर्शन र जनसभा भयो । वर्तमान राज्यले भीषण दमन गर्दागर्दै पनि यसरी ठूलो सङ्ख्यामा जनताको सहभागिता हुनुको कारण के होला ?
यसको पहिलो कारण त हाम्रो पार्टीका नेता, कार्यकर्ता, सदस्य कमरेडहरूले जनता र देशका पक्षमा अथक रूपमा गरिरहनुभएको इमानदारीपूर्ण मेहनत हो । दोस्रो कारण आमजनता वर्तमान दलाल पुँजीवादी सत्तासँग सहमत छैनन् भन्ने हो । तेस्रो कारण कम्युनिस्ट भनिने सामाजिक दलाल पूँजीवादी सरकारले जनता र देशको हितमा काम गरिरहेको छैन र जनता यससँग पनि खुसी छैनन् भन्ने हो । चौथो, जनता हाम्रो पार्टीले अगाडि सारेको दलाल पुँजीवादी सत्ताको सट्टा वैज्ञानिक समाजवादी राज्यसत्ता र एकीकृत जनक्रान्तिसँग सहमति राख्छन् भन्ने हो । यी यस्ता कारणहरू हुन् जसले पार्टी पुनर्गठन दिवस भव्य रूपले सम्पन्न भयो ।
३) दुईतिहाइ बहुमतको सरकार बन्दा पनि यो राज्यले जनताका पक्षमा कुनै काम गर्न नसक्ने मात्र होइन, दिनदिनै बदनाम भैराखेको छ । यसलाई कसरी हेरिराख्नुभएको छ ?
४) पुनस्र्थापित संसदीय व्यवस्था फेरि विफल भएको अवस्थामा पार्टीले के सोचिरहेको छ ?
दलाल पुँजीवादी सत्तालाई आमूल परिवर्तन गर्नु र त्यसको ठाउँमा श्रमिक वर्गीय सत्ता वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्नु पार्टीको मूल उद्देश्य हो । त्यसका लागि सही विचार निर्माण गर्नु, कार्यदिशा र योजनाहरू निर्माण गर्नु, जनतालाई त्यसका पक्षमा सङ्गठित र परिचालित गर्नु साथै क्रान्तिलाई अविराम अगाडि बढाउनु हाम्रो जिम्मेवारी हो । शान्तिवार्तामा हामीलाई धोका भएपछि नै हामी निरन्तर क्रान्तिमा अगाडि बढिरहेका छौँ ।
५) यसअघि भारतीय हस्तक्षेप एकलौटी थियो । अहिले पश्चिमाहरूको पनि प्रत्यक्ष सहभागिता देखिएको छ । यसले नेपालको राजनीतिमा कस्तो प्रभाव परेको देख्नुभएको छ ?
६) देशमा वैदेशिक हस्तक्षेप र देशीय प्रतिक्रियावादीहरूको साँठगाँठमा अर्को प्रतिगमन हुने सम्भावना देखिएको छ ?
यसलाई पूरै इन्कार गर्न सकिँदैन तर नेपाली जनताको क्रान्तिकारी एवम् परिवर्तनकारी चरित्रका कारण यो सम्भावना कमजोर छ । यसको तुलनामा राज्यको असफलतालाई वैज्ञानिक समाजवादी क्रान्तिद्वारा जनताको सत्ता निर्माणको सम्भावना मुख्य देखिन्छ । जनता नै जुनकुनै परिवर्तनका मुख्य आधार शक्ति हुन् । यसरी भन्दा नेपाली जनताले दलाल पुँजीवादबाट पनि पछि फर्किन मान्लान् भन्ने लाग्दैन ।
७) विभिन्न क्रान्तिकारी पार्टीहरूका बीचमा एकताको कुरा चलिरहेको थियो । यसका बारेमा बताइदिनुस् न ?
८) केपी—प्रचण्डहरूले कम्युनिस्टहरूको बदनाम गरिरहेको स्थितिमा उनीहरूको प्रतिवाद कसरी गर्ने सोच्नुभएको छ ?
९) सरकारले वार्ताको कुरा ग¥यो तर तपाईंहरूले वास्तै गर्नुभएन भन्ने छ नि ?
१०) वार्ता गर्नुभएन भन्दै सरकारले फेरि दमन सुरु गरेको छ । कमरेड प्रकाण्ड, कमरेड जीवन्तलगायत नेतालाई वारेन्ट गरिएको छ भने गिरफ्तारी पनि सुरु गरेको छ । यसबारे के भन्नुहुन्छ ?
हो, केपी—प्रचण्डको सरकारले दमन बढाएको छ । यसले के स्पष्ट गर्छ भने उनीहरूले वार्ताको अमूर्त हल्ला जसरी चलाए, त्यो पनि समस्यालाई हल गर्नका लागि गम्भीरतापूर्वक गरेको पहल नभई जनताको आँखामा छारो हाल्न र दमन गर्नका लागि गरिएको जाल मात्र थियो । हामीले उचित ध्यान नदिएको भए वार्ताको आडमा कैयाँै देशमा (भारतमा कमरेड आजादको निर्मम हत्या गरे) मा भएजस्तै कुनै पनि घटना हुन सक्थ्यो भन्ने स्पष्ट हुन्छ । उनीहरूको षड्यन्त्र असफल भएको छ । तर केपी—प्रचण्डले के बुझ्नुपर्छ भने हाम्रा नेताहरूलाई शान्तिपूर्ण कार्यक्रममा सहभागी बन्न दिइएन भने उनीहरूले पनि गम्भीर प्रतिरोधको सामना गर्नु पर्नेछ । उनीहरूका कार्यक्रमहरू पनि चल्न सक्ने छैनन् ।
११) के अब राज्यसँग युद्धको खतरा बढेको हो ?
१२) क्रान्ति सम्पन्न नहुँदासम्म जनताका पक्षमा कसरी काम गर्नुहुन्छ ?
१३) काङ्ग्रेस, राप्रपालगायत पार्टीले त केपी—प्रचण्ड सरकारको असफलतलाई कम्युनिस्टकै असफलता भन्दै हिँडेका छन् नि ?
१४) पछिल्लो समयमा देशभित्र धार्मिक अतिवाद देखापरिराखेको छ । यसका बारेमा पार्टीको धारणा राखिदिनुस् न !
१५) अरू केही भन्नुहुन्छ कि ?
मैले पार्टीका धारणा राख्न पाएकोमा धन्यवाद !
२०७५ माघ ४ गते शुक्रबार प्रकाशित
जनविरोधीलाई जनताको बीचमा कारबाही गर्छौँ : सन्देश
बलात्कारी ठहर स्ववियुका नेता पक्राउ